Ingabe inja yakho yamanzi ikhonkotha kakhulu? Funda izimbangela zokuthi kungani ikwenza | Izinja Umhlaba
Ukufundisa izinja zamanzi ukuze zamukele imithetho ethile okufanele ziyilandele ngaphakathi ekhaya nalapho ziphuma, imvamisa kungumsebenzi onzima futhi onzima. Kuvamile ukuthi izinja zikhonkothe ​​lapho zibona isilwane, isihambi noma yini enye engaziwa kubo.
Kodwa-ke, izinkinga zivela okwamanje lapho inja yamanzi ikhonkotha ngokungalawuleki, ngokuqhubekayo futhi akunakwenzeka ukuthola isizathu. Akungabazeki, ukukhonkotha kwe-canine kuqukethe okuthile okucasulayo impelaKodwa-ke, kuyadingeka ukwazi ukuthi yiziphi izizathu zokuthi kungani bevame ukukwenza.
1 Kungani inja yakho yamanzi ikhonkotha kangaka?
2 Izimbangela zokukhonkotha kwenja yakho yamanzi
3 Ungayivimbela kanjani inja yakho ukuthi ingakhonkothi?
Kungani inja yakho yamanzi ikhonkotha kangaka?
Ukuze wenze inja yakho yamanzi iyeke ukukhonkotha ngokweqile, kufanele uqale ngokusungula yini imbangela yokuziphatha okunje, ikakhulukazi uma ukukhonkotha okuningi akuyona into ejwayelekile esilwaneni sakho; Kunezeluleko eziningi esingakunika zona ukuze umise inja yakho ukukhonkotha, yize kuya ngesizathu esiyimbangela yayo, ingahle isebenze noma ingasebenzi.
Ngemuva kokuthola i- isizathu sokuthi kungani isilwane sakho sikhonkotha ngokweqile, kunezinto eziningi ongazenza ukuyiyeka. Kubalulekile ukuthi, kunokuba umjezise, ​​zama ukwenza eyakho inja yamanzi Funda indlela ehamba phambili yokuthi lokho kuziphatha akulungile, nokuthi kufanele ushintshe indlela oziphatha ngayo ngoba ayikukhathazi nje kuphela, kodwa nabantu abakungqongile.
Yize lokhu kungabonakala njengomsebenzi onzima impela, iqiniso ukuthi imvamisa ayinzima njengoba ungacabanga, ngoba lezi zilwane zivame ukufunda ngokushesha okukhulu ngokuzifundisa ngokuqina nangokuziphatha kodwa ngaphandle kokuziphatha kabi.
Kuvamile ukuthi abafuyi bezinja zamanzi abaningi bazibuze izizathu zokuthi kungani izifuyo zabo zikhonkotha ngokweqile. Kumele kuqashelwe ukuthi ukukhonkotha kwezinja kuzolingana nokukhala kwezingane, ngakho-ke kungenzeka ukuthi inezincazelo eziningi, ngaphezu kokuveza ubukhulu besimo semvelo sesilwane, noma ngabe siyethuka, sidabukile, siyesaba, siyabhoreka, siyagula noma sifuna ukudlala, njll.
Kubalulekile futhi ukuthi unake ukuthi izinhlobo ezithile zezinja zivame ukuba phezulu kakhulu uma ziqhathaniswa nezinye, okuwumphumela, phakathi kokunye, kweziphambano zofuzo ezenzekile. Isibonelo salokhu yilezi the chihuahuas, okuvame ukwaziwa kakhulu ngokuba izinja ezinovalo ezikhonkotha cishe noma yiniNgakho-ke, uma unenja yalolu hlobo, kuzodingeka ukuthi uzihlomise ngokubekezela.
Uma inja yakho yamanzi ivame ukukhonkotha ngezikhathi ezithile, lokhu kungukuziphatha okungabalulekanga kangako ngoba kungenzeka ukuthi ucela ukudla, ufuna ukukwazisa okuthile, noma ufuna ukudlala nawe. Kodwa-ke, lapho ubona ukuthi ukukhonkotha kwakhe kuba ngokungalawuleki futhi kuyacasula, kuze kufike lapho kuzocasula khona omakhelwane, kuzofanela naka ukunquma ukuthi yiziphi izizathu ezenza lokhu kwenzeke.
Izimbangela zokukhonkotha kwenja yakho yamanzi
Phakathi kwezizathu ezinkulu zokuthi kungani inja yakho yamanzi ingakhonkotha yilezo ezibalulwe ngezansi:
Isilwane sakho sasekhaya singakhonkotha ngenxa yokwesabaMhlawumbe uke wabona okuthile, umuntu noma ungekho endaweni lapho uzizwa uphephile khona; kulokhu, ukukhonkotha bekuzohambisana nezinye izimpawu zomzimba.
Ukukhonkotha nakho kungaba uphawu olucacile lokuthi inja yakho inesifiso sokuyidlala.
Izinhlobo ezithile zezinja, kufaka phakathi i- inja yamanzi yaseSpain, bazingela njengengxenye yomuzwa wabo, yingakho eziningi zalezi zinja zivame ukusebenzisa ukukhonkotha njengesiginali ukwazisa umzingeli (kulokhu kumnakekeli wakhe) noma ezinye izinja ukuthi kukhona okuthile ensimini.
Kukhona ukuthi kungenzeka ukuthi ukukhonkotha kuyisiginali ye-alamu okwamanje lapho bekwazi ukubona khona umuntu noma into esondelayo noma ngaphakathi kwendawo abakuyo. Uma ungasinaki isilwane sakho, kungenzeka kakhulu ukuthi sebenzisa ukukhonkotha ukuzama ukukwazisa ukuthi kudinga ukunakwa kwakho, enabelana futhi nidlale ndawonye naye.
Kumele kuqashelwe ukuthi izinja zamanzi ezinja nezenjwayelo nazo ziba nokuhlangenwe nakho kokuzizwa ngokomzwelo, yingakho kulula ukuthi uhlale uzifaka kunoma imuphi umsebenzi, ukuze bezwe ukuthi bayingxenye yomndeni. Inja yakho ibingakwazi ukukhonkotha ngenhloso yokuvikela indawo yabo ukuzwa usongelwa ngoba okuthile noma umuntu othile ufuna ukukufaka; kulokhu, ukukhonkotha kuwuphawu olucacile lokuzivikela.
Uma isilwane sakho sinohlobo oluthile lwezifo olubangela ubuhlungu, kungenzeka ukuthi enye indlela yokuveza ukungakhululeki kwayo kungukukhonkotha; Kulokhu, kubalulekile ukuthi uqiniseke ukuthi ukhipha noma ikuphi ukugula okungenzeka lapho inja yakho ikhonkotha ngokungalawuleki, ngoba kaningi ayibonakali. Ukukhonkotha kungaphakama futhi uphawu lokukhungatheka, ngesikhathi lapho inja yakho yamanzi ifuna ukufeza okuthile futhi ingakwazi ukukuthola, ngendlela efanayo nengane ezokuveza ngayo ngokukhala.
Ungayivimbela kanjani inja yakho ukuthi ingakhonkothi?
Ukuze uqalise, udinga ukuqinisekisa yehlisa umoya futhi ugweme ukuphelelwa yithembaNjengoba kuphazamisa noma kucasula njengoba ukukhonkotha kwesilwane sakho kungabonakala ngezikhathi ezithile, kubalulekile ukuthi uhlale ukhumbula ukuthi ukukhonkotha ukuphela kwendlela esingaziveza ngayo.
Kodwa-ke, uma kwenzeka ungazi ukuthi ungasenza kanjani isilwane sakho siyeke ukukhonkotha, ungahlala usebenzisa izindlela ezithile ukuze uzame ukusenza sehlise umoya futhi sikuvimbe ekuqhubekeni sikhonkothe; Kulezi zinyathelo, okulandelayo kugqamile:
Kufanele uzame ukulungisa isilwane sakho usebenzisa uhlamvu oluthile bese uyalandelela. Sebenzisa isenzo noma isignali evumela inja yakho yamanzi ukuthi iqonde ukuthi sekuyisikhathi sokuthula, yize kungafanele ishiywe lapho kuphela ngoba kungenzeka ukuthi uma usuka kuyo, izoqhubeka nokukhonkotha; Kungaleso sizathu-ke kufanele uzihlomise ngokubekezela uhlale nesilwane sakho ukuze aqonde ukuthi kufanele athule, ekugcineni anikezele.
Kufanele uhlale uzolile, ngoba yize umsindo wokukhonkotha ngokweqile ungacasula futhi uphazamise, iqiniso ukuthi uma ulahlekelwe ukuzola isilwane sakho sizokubona futhi esikhundleni sokusiza, ungagcina ukwanda ukukhonkotha kwazo, ngoba izilwane ungalandeli abaholi abangalinganiseli. Yini enye, akumele ukhohlwe ukuthi izinja zizwa yonke into, ngisho nemizwa yabanakekeli babo, ngakho-ke uma uzithola ucasukile noma uthukuthele, isilwane sakho sizoveza leyo mizwa efanayo. Ngakho-ke ngaphambi kokuthi uqale ukukulungisa, udinga ukuzama ukwehlisa umoya.
Lapho isilwane sakho sikhonkotha entweni ethile, umuntu noma indawo, kungahle kube ukuzama ukuthola indawo yaso. Uma kunjalo, kufanele uye lapho inja yakho ikhona bese uyasho ukuthi ikhonkotha kanjani ngathi ngeyakho. ukudlulisa igunya futhi ngaleyo ndlela sikwazi ukudala umgoqo ongabonakali lapho isilwane sakho siqonda ukuthi asikwazi ukweqa.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » Yini okufanele uyenze uma inja yamanzi ikhonkotha kakhulu?
Izindlebe ezilumayo ezinjeni